Location: Mbido » Ịdee » Health » Ọmụmụ Harvard: Ọgwụ mgbochi COVID-19 'mmetụta dị' dị n'uche gị
Ndị ọkà mmụta sayensị si na Boston nke dabeere na Beth Israel Deaconess Medical Center bịara ná nkwubi okwu na ihe a na-akpọ 'nocebo mmetụta' --adịghị mma mmetụta nke nchegbu ma ọ bụ ọjọọ na-atụ anya - ruru atọ n'ụzọ anọ nke niile ọgwụ mgbochi mmetụta mmetụta.
Mgbe nyochachara akụkọ nke ihe karịrị ndị sonyere nnwale ụlọ ọgwụ 45,000, Ụlọ Akwụkwọ Ahụike Harvard ndị nchọpụta kwuru na ọtụtụ n'ime Ọgwụ mgbochi covid-19 'mmetụta' nke ndị mmadụ na-ekwu na ha na-enweta mgbe jab ahụ gasịrị, nke ndị mmadụ tụrụ anya na ọ bụghị ọgwụ mgbochi.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nchegbu banyere ya Ọgwụ mgbochi covid-19 'mmetụta' ha na-enwe mmetụta ha n'ezie ọ bụrụgodị na ha enweta placebo, nchọpụta ọhụrụ na-egosi.
Mmetụta dị iche iche nke 'usoro', dị ka isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, na mgbu nkwonkwo ka akọpụtara na akụkụ abụọ nke otu nyocha ahụ: site n'aka ndị natara ọgwụ mgbochi COVID-19 dị iche iche, na ndị natara placebo n'amaghị ama.
Mgbe nyochachara akụkọ ndị ahụ, ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Boston Bet Israel Deaconess Medical Center bịara na nkwubi okwu na ihe a na-akpọ 'nocebo effect' - mmetụta na-adịghị mma nke nchegbu ma ọ bụ atụmanya ọjọọ kpatara - ruru ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke mmetụta ọgwụ mgbochi niile a kọrọ.
Akụkọ ahụ, nke e bipụtara na JAMA Network Open journal, na-ekwu na 35% nke ndị na-enweta placebo kọrọ mmetụta ndị na-adịghị mma mgbe ọgwụ mbụ gasịrị na 32% mgbe nke abụọ gasịrị. N'ụzọ dị ịrịba ama karịa "ihe ọjọọ" (AEs) ka akọọrọ na otu ọgwụ mgbochi, mana nke a na-akpọ "nzaghachi nocebo" bụ "76% nke AEs systemic mgbe nke mbụ gasịrị. Ọgwụ mgbochi covid-19 dose na 52% mgbe usoro nke abụọ gasịrị.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na, ọ bụ ezie na ihe kpatara ịla azụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ "dị iche iche na mgbagwoju anya," nchegbu banyere mmetụta ndị nwere ike isi na ya. Ọgwụ mgbochi covid-19 "dị ka ọ bụ isi ihe" na "mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ọha kwesịrị ịtụle nzaghachi nocebo ndị a dị elu."
Otu n'ime Ụlọ Akwụkwọ Ahụike Harvard ndị prọfesọ tinyere aka na nyocha ahụ, kọwara sayensị dị n'azụ “mmetụta nocebo,” na-arụtụ aka na “akara ngosi a kapịrị ọnụ,” dị ka isi ọwụwa na ike ọgwụgwụ, ka edepụtara n'ọtụtụ akwụkwọ ozi dị ka nsonaazụ ahụkarị nke ọgwụ mgbochi COVID-19.
"Ihe akaebe na-egosi na ụdị ozi a nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara ịkọwa mmetụta dị n'azụ kwa ụbọchị dị ka nke sitere na ọgwụ mgbochi ma ọ bụ na-akpata nchekasị na nchekasị na-eme ka ndị mmadụ na-eche echiche banyere mmetụta anụ ahụ banyere ihe ọjọọ," ka o kwuru.
Ọzọ na: Israel | Covid-19
Azụmahịa na-abụghị nke ekwu, sị:
Jenụwarị 23, 2022 na 23:03
Ihere mee unu! Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ma merụọ ahụ n'ihi na ha nwere nghọta zuru oke ikwere na ọbara ọmụmụ gị dị n'aka gị!
Ton ekwu, sị:
Jenụwarị 22, 2022 na 00:16
Big Farma ga-akwụrịrị ọmụmụ ihe a Otu enyi m nwụrụ nkeji iri ka Pfizer gachara
Deborah ekwu, sị:
Jenụwarị 21, 2022 na 03:50
E nwere obere ike ọgwụgwụ na e nwere onye na-apụghị ihi ụra n'ehihie na-akụtu ewepụghị na-ehi ụra ụbọchị abụọ ozugbo. Echere m na ọmụmụ Deaconess ga-ekwu na ahụ ọkụ 102 na ịma jijiji bụ naanị echiche efu, nri?
Ụmụ nwanyị na-emeghachi omume karịa ụmụ nwoke. Ụmụ nwanyị hà na-enwe afọ ojuju? Ee e. Estrogen bụ ihe na-akpali mmeghachi omume mgbochi na testosterone na-egbochi nzaghachi mgbochi.
Nikki ekwu, sị:
Jenụwarị 20, 2022 na 17:44
Ọmụmụ ihe a megidere data CDC nke ya na akụkọ VAERS. Ọ na-emegidekwa data ndị ọzọ gburugburu ụwa, gụnyere Sistemụ Kaadị Yellow nke UK.